Faahfaahinta Farsamo ee Marmaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFaahfaahinta Farsamo ee Marmaray
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, VIDEO
astaamaha farsamada ee marmaray
• Waxaa jira isugeyn dherer ah oo ah 13.500 m, oo ka kooban 27000 m, oo midkastaba uu ka kooban yahay xariiq laba jibaaran.
• marinka hunguriga waxaa lagu sameeyaa tuneel la dhex geliyey iyo xariiq xNUMX dherer ah oo laamiga ah waa 1 m, Xariiqda 1386.999 dhererka godku waa 2 m.
• Sii wadidda tunnel-ka qulqulaya ee dhinacyada Aasiya iyo Yurub waxaa lagu bixiyaa qashin-qodayaasha dhererka qoditaanka Line 1 waa 10837 m iyo dhererka qoditaanka ee Line 2 waa 10816 m.
• Wadadu waa waddo bilaa-ballac ah oo ku jirta tunelada oo waa waddo ballac ballaaran oo ka baxsan tunleyda.
• Xargaha loo adeegsaday waxay ahaayeen UIC 60 iyo biraha adag ee boqosha.
• Qalabka isku xirka ayaa ah nooca HM, oo ah nooca dabacsan.
• Xargaha dhererkoodu yahay 18 m waxaa loo sameeyaa biraha dhaadheer.
• Baloogyada LVT waxaa loo adeegsaday tunnel-ka.
• Dayactirka wadada Marmaray waxaa lagu fuliyaa mashiinada nidaamka ugu dambeeyay anagoo fulinayna iyadoo aan la carqaladeyneynin iyadoo la raacayo buugga dayactirka wadada TCDD iyo nidaamka dayactirka shirkadaha soosaarayaasha oo loo diyaariyey si waafaqsan xeerarka EN iyo UIC.
• Baaritaanka muuqaalka ee khadka waxaa loo sameeyaa si joogto ah maalin kasta, iyo kormeerka ultrasonic ee biraha waxaa bil walba lagu sameeyaa mashiinno xasaasi ah.
• Xakameynta iyo dayactirka tunelada waxaa loo fuliyaa iyadoo la raacayo halbeegyo isku mid ah.
• Adeegyada dayactirka waxaa lagu fuliyaa Maareeyaha 1, kormeeraha dayactirka iyo dayactirka 1, Injineer 4, kormeeraha 3 iyo shaqaalaha 12 ee Dayactirka Jidadka iyo Dayactirka ee Xarunta Marmaray.
Heerka Qaybta Maqalka ee Heerka Sare 63 km
- Tirada Saldhigyada Dusha sare Xamuusyada Qeybaha
Wadarta dhererka Wadada Wadada Tareenka Isku Daran xnumxkm
- Dhererka Qodida Qodista 9,8 km
- Dhererka Tuubada Tuubada La Dhex-Jaray xnumxkm
- Furan - Dhererka Isku-Darka Waddada 2,4 km
- Tirada Saldhigyada Dhulka Qaybaha 3
Length Station 225m (ugu yar)
Tirada Rakaabka Hal Dariiqo Rakaabka 75.000 / saacad / hal hab
Baaxadda ugu weyn 18
Xawaaraha Sare 100 km / h
Xawaaraha Ganacsiga 45 km / h
Tirada Jadwalka Tareenka 2-10 daqiiqado
Tirada Gawaarida 440 (2015 sano)
Qulqulka biyuhu wuxuu ka kooban yahay dhowr waxyaalood oo lagu soo saaray barxad qallalan ama markab dushiisa. Waxyaabahan ayaa markaa lagu jiidayaa goobta, lagu dhex geliyaa kanaal kuna xirmaan si ay u dhisaan gobolka ugu dambeeya ee tunnelka.
Jaantuska hoose, sheyga waxaa wata barxadda dhagxaanta catamaran loona geeyaa goob mug leh. (Tunnel River Tunnel in Japan)
Sawirka kor ku yaal wuxuu muujinayaa baqshadaha biraha tuubada birta ee lagu soo saaro markab. Tuubooyinkan ayaa markaa dib u jiidan doona sida markab waxayna u guureen goobta si ay u buuxsamaan oo loo dhameeystiro (Sawirka kor ku xusan) [Koonfurta Osaka Dekada Japan (wadada tareenka iyo wadada) Tunnel] (Kobe Port Minatojima Tunnel ee Japan).
kor ku xusan; Kawasaki Harbor Tunnel ee Japan. midigta ah; Koonfurta Osaka Harada Tunnel ee Japan. Labada dhinacba waxay ku xiran yihiin qaybo kala duwan; Marka, marka la sii daayo biyaha iyo barkadda loo isticmaalo dhismaha walxaha waxaa ka buuxsamey biyo, waxyaabahan ayaa loo oggolaan doonaa in ay ku daboolaan biyaha. (Sawirada laga soo qaaday buug ay soo saartay Ururka Machadka Baarista iyo Dib u-dejinta Japan.)
Dhererka tunnel-ka la quusay ee badda xeebta ah ee Bosporus waa qiyaastii 1.4 kiiloomitir, oo ay ku jiraan isku xirnaanta ka dhex socda tunnel-ka la quusinaayo iyo marinnada qoditaanka. Tunnelku waa waddo muhiim u ah isku-socodka labada-hagood ee ka hooseeya Bosphorus; tunnelkan wuxuu ku yaalaa inta u dhaxeysa degmada Eminönü ee dhanka Yurub ee magaalada Istanbul iyo degmada Üsküdar ee dhanka Aasiya. Labada Khadba tareenka waxay ku fidayaan isla qeybaha tunka bir-yarooyinka waxayna midba midka kale uga go'aa darbiga kala go'ida bartamaha.
Muddadii qarnigii labaatanaad, in ka badan boqol boqolkiiba jaangooyo ayaa loo dhisay waddo ama gaadiidka tareenada adduunka oo dhan. Jidadka qulqulaya waxaa loo dhisay qaabdhismeed dabacsan kadibna wuxuu ku dhuftey kanaal hore u daadiyey oo daboolay lakabka kabka. Guryahaasi waa in ay leeyihiin miisaan ku filan oo ku filan si looga hortago in ay dabaalaan kadib marka meeleynta.
Toureelka waxaa laga sameeyaa qaar ka mid ah walxaha tunnel ee la soo saaray oo loo diyaariyey dherer ahaan loo xakameyn karo; mid kasta oo ka mid ah qodobbadani guud ahaan 100 m, oo dhererka tubbada tuubooyinka ay ku xiran yihiin kuna biiraan biyaha si ay u sameeyaan xaaladda ugu dambaysa ee tunnelka. Elektar kasta wuxuu leeyahay qaabab kala duwan oo ku meel gaar ah oo lagu meeleeyo qeybaha dambe; Noocyadaasi waxay u oggolaanayaan in walxaha ay ku daboolaan marka gudaha ay qalalan tahay. Hannaanka dhuxusha waxaa lagu dhameeyaa meel qallalan oo qalalan, ama walxaha waxaa lagu furtaa badda sida gidaar oo dabadeedna lagu soo saaro qaybo dabiici ah meel u dhow goobta ugu dambaysa ee dhismaha.
Waxyaabaha tubbada la dhex geliyey ee la soo saaray oo lagu dhammeeyay god qallalan ama meel jiingado ah ayaa markaa lagu jiidayaa goobta; ku dhexjiray kanaal kuna xidhnaa sameynta gobolka ugu dambeeya ee tunnelka. Dhanka bidix: Cuntada waxaa loo jiidayaa meel howlihii ugu dambeeyay ee shirarka lagu qaban doono si loogu baabtiiso deked mashquul ah.
Waxyaabaha tunnelka ah waxaa si guul leh loogu jiidi karaa masaafooyinka waaweyn. Kadib hawlgallada qalabka ayaa lagu fuliyay Tuzla, waxyaabahan waxaa lagu hagaajiyey firaaqyada harooyinka sida gaarka ah loo dhisay si loogu suurto geliyo hoos u dhigida ashyaa'da kanaal diyaarsan. Waxyaabahaas ka dib ayaa la dhajiyay, iyaga oo siinaya miisaanka looga baahan yahay hoos u dhigista iyo hoos udhaca.
Subin-ka-abuurka waa shey waqti qaadanaya oo muhiim ah. Sawirka kore, sheyga waxaa lagu muujiyaa inuu hoos ugu hooseeyo. Qaybtaan waxaa si toos ah loo xakameeyaa iyadoo la adeegsanayo silsiladaha iyo nidaamyada fiilooyinka iyo dusha sare ee weelka qulqulka ayaa xukuma booska toosan ilaa sheyga hoos loo dhigo oo si buuxda loogu fadhiyo aasaaska. Sawirka hoose, booska qodobka waxaa kormeeri kara GPS-ka inta lagu gudajiro baabtiiska. (Sawirro laga soo qaaday buugga ay daabaceen Ururka Japan ee Injineerada Baaritaanka iyo Dhalashada.)
Waxyaabaha dadka la dhex geliyey ayaa la isugu keenayaa dhammaad ilaa dhammaad leh waxyaabihii hore; intaas ka dib, biyaha ku yaal barta ku xirnaanshaha walxaha iskuxiran waa la daadiyay. Natiijooyinka ka soo baxa biyaha, cadaadiska biyuhu dhinaca kale ee sheyga ayaa isku keenaya gambada caagga ah si ay gogosha biyuhu u biyuhu u dhicin. Waxyaabaha taageerada ku meelgaarka ah la qabtay meesha halka aasaaska hoosta qodobbada la dhammaystiray. Kadibna kanaalka ayaa la buuxiyay oo lakab ilaalin ah oo loo baahnaa ayaa lagu daray. Kadib markii la geliyo tuubada tuubada tuubada tuubada tuubooyinka, isgoysyada isgoyska ee tunnel qodista iyo tunelada tuubada waxaa ka buuxay qalab buuxinaya biyo-siin. Mashiinnada tunnel-ka (TBMs) ayaa loo adeegsan jiray in lagu qodbo tuneellada illaa iyo tunbiyada la gaaro.
Dusha sare ee tunnelka waxaa lagu daboolay gadaal si loo hubiyo xasilloonida iyo ilaalinta. Dhamaan sedexda sawirood waxay muujinayaan dib u buuxin ka dib markab laba jibbaaran oo isjiidjiista iyadoo la adeegsanayo habka tremi. (Sawirro laga soo qaaday buugga ay daabaceen Ururka Japan ee Injineerada Baaritaanka iyo Dhalashada)
Qolka biyuhu ku dhex jiraan ee ka hooseeya darbiga, waxaa jira hal qol oo leh laba qol, mid walbana loo leexdo tareenka. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin gabi ahaanba waxay ku dhegan yihiin badda dhexdeeda si markaa dhismayaashu u shaqeyaan ka dib muuqaalka badaha ayaa la mid ah astaamaha badaha kahor intaan dhismaha la bilaabin.
Mid ka mid ah faa iidooyinka dariiqa godka tuubbada la dhex geliyey ayaa ah in isgoyska qaybta tunnelka si fiican loogu habeyn karo baahiyaha gaarka ah ee tunnel kasta. Sidan, waxaad ku arki kartaa qeybaha kala duwan ee iskutallaabta ee laga isticmaalo adduunka sawirka kore. Tuubooyinka biyuhu ku dhex socdaan ayaa loo dhisay qaab maadooyin la taaban karo oo la xoojiyay kuwaas oo, qaab caadi ah leh, ama leh biro baaldiyo bir ah ama aan lahayn oo si wada jir ah ula shaqeeya walxaha gudaha la taaban karo ee la xoojiyay. Taa bedelkeeda, farsamooyinka hal-abuurka leh ayaa lagu dabaqay Japan illaa sagaashankii, iyada oo la adeegsanayo maahmaahyo aan la xoojinin laakiin ka soo baxay gogol-xaar ah oo ay sameeyeen sandwiching ka dhexeeya baqshadaha birta gudaha iyo tan; Gunaanadyadaani qaab dhismeed ahaan waa isku dhan. Farsamadan ayaa lagu fulin karaa iyadoo la soosaarayo dareere tayo sare leh oo la taaban karo. Qaabkani wuxuu baabi'in karaa shuruudaha la xiriira sameynta iyo soo saarista biraha biraha iyo wasakhda, iyo mustaqbalka fog, adoo siinaya ilaalin ku filan baqshadaha biraha, dhibaatada shilalka waa la baabi'in karaa.
DAAWASHADA IYO KHUDBADA KALE EE TUNNEL
Jid-hoosaadka ka hooseeya Istanbul wuxuu ka kooban yahay habab kala duwan.
Qeybta guduudan ee wadadu waxay ka kooban tahay tunelo biyo mareen ah, halka qaybaha cad inta badan loo dhisay sida tuubooyinka qashin-qubka iyadoo la adeegsanayo mashiinnada tunnel-ka (TBM), qaybaha jaalaha ahna waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo farsamada Furan (C&C) iyo New Austrian Tunneling Method (NATM) ama habab kale oo dhaqameed. . Jaantusku wuxuu muujinayaa Mashiinnada Xirmooyinka Qalliinka (TBM) oo wata tirooyinka 1,2,3,4 iyo 5
Tunelada qodista dhagaxa lagu furay dhagaxa iyagoo adeegsanaya mashiinada tunnel-ka (TBMs) waxay kuxiranaayeen tuneelka la qubeysto. Dariiq kasta iyo dariiq tareen ayaa ku yaal jid kasta ookan. Jid-wadeyaasha waxaa loo qaabeeyey masaafo ku filan oo u dhexeeya midba midka kale si looga hortago inay midba midka kale si weyn u saameeyaan. Si loo bixiyo suurtagalnimada in loo baxsado dariiqa isbarbar socda ee xaaladaha degdegga ah, tuneel gaagaaban oo isku xir ah ayaa laga dhisay waqtiyo isdaba joog ah.
Tunelada magaalada hoostiisa ku jira waxay ku xiran yihiin midba midka kale mitir 200; sidaas darteed, waxaa la siiyaa in shaqaalaha adeegga ay si sahlan uga gudbi karaan kanaal kan kale. Intaa waxaa sii dheer, haddii shil dhaco meel kasta oo ka mid ah tunelada qoditaanka, isku-xirkaasi wuxuu bixin doonaa dariiqooyin nabdoon oo badbaado leh wuxuuna fursad u siinayaa shaqaalaha samatabbixinta.
Mashiinnada cirridka tunnel (TBM), horumarin guud ayaa lagu arkay sanadii ugu dambaysay ee 20-30. Tusaalooyinka muujinaya tusaale ahaan mashiinka noocan oo kale ah. Dhexdhexaadiyaha gaashanka wuxuu ka dheeraan karaa mitirada 15 ee farsamooyinka hadda jira.
Qalliinka mashiinnada caajis ee casriga ah waxay noqon karaan kuwo dhib badan. Sawirku wuxuu adeegsanayaa mashiin saddex waji leh, kaas oo loo adeegsado Japan, si uu u furo darbi qaabeysan. Farsamadan ayaa loo adeegsan karaa halka aaladaha idaacadda laga dhiso, laakiin aan loo baahnayn.
Halka qaybta tunnelka ay isku bedeshay, dhowr hanaan oo takhasus leh, iyo sidoo kale habab kale, ayaa lagu dabaqay (Habka New Austrian Tunneling Method (NATM), qoditaanka-ololka iyo mashiinka furitaanka). Nidaamyo kuwan la mid ah ayaa loo adeegsaday intii lagu jiray qoditaankii Saldhigga Sirkeci, kaas oo lagu diyaariyey xarun weyn oo qoto dheer oo dhulka hoostiisa laga furay. Laba saldhig oo kala duwan ayaa laga dhisay dhulka hoostiisa iyagoo adeegsanaya farsamooyin u dhow dhow; Saldhigyadan waxay ku yaalliin Yenikapı iyo Üsküdar. Meesha loo adeegsado tunelada-furan, harooyinkaas waxaa loo dhisay hal sanduuq oo isugeys ah iyadoo la adeegsanayo darbiga kala-goynta ee u dhexeeya labada khadadka.
Dhamaan tunelada iyo idaacadaha, go'doominta biyaha iyo hawo ayaa loo rakibay si looga hortago daadguxu. Saldhigyada tareenka ee magaalada hareeraheeda ah, mabaadi'da naqshada oo la mid ah kuwa loo adeegsado saldhigyada dhulka hoostiisa ayaa loo isticmaali doonaa. Sawirrada soo socda ayaa muujinaya tuneel laga dhisay habka NATM.
Meesha loo baahan yahay khadadka hurdada ee isku xidha ama khadadka wadajirka ah ee dhinacyadu u baahan yihiin, dariiqooyin tuneel kala duwan ayaa loo adeegsadaa isku darka. Qolkan gudahiisa, farsamada TBM iyo farsamada NATM waa la istcimaalay.
BAARITAANKA IYO FARSAMADA
Maraakiibta qodista leh oo wata baaldiyo aruurinta ayaa loo isticmaalay in lagu sameeyo qaar ka mid ah qodista biyaha hoostooda iyo shaqooyin biyo qallalan oo loogu talagalay kanaalada tuneellada.
Boostada Tube tunnel waxaa la saaray baddii fareeshka ahayd. Sidaa darteed, kanaalo ayaa laga furay dabaqa weyn ee badda si ay u qaabeyso waxyaabaha dhismaha ku jira; intaa waxaa dheer, kanaalkan waxaa loo dhisay qaab ah in lakab dabool leh iyo lakab ilaalin lagu dhejiyo Tunnel.
Qulqulka biyaha dhulka hoostiisa ah iyo howlihii biyo mareen ee laga sameeyay ceelkan ayaa loo fuliyay xagga hoose iyadoo la adeegsanayo qodista biyaha culus iyo qulqulka biyaha. Wadarta guud ee carrada jilicsan, ciid, dhagaxa iyo dhagaxa laga soo saaray ayaa ka badan wadarta tirada 1,000,000 m3.
Barta ugu hooseysa ee wadada dhan waxay ku taalaa Bosphorus waxayna leedahay qoto dheer oo qiyaas ahaan u jirta mitir 44. Tuubada dhex galka lakabka difaaca ayaa ah ugu yaraan mitir 2 mitir ayaa la dhigayaa tunnelka iyo isgoysyada tuubooyinka tuubooyinku waa qiyaastii 9 mitir. Sidaas awgeed, qoto-dheerida shaqeynta dredger waxay ahayd qiyaastii 58 mitir.
Waxaa jiray tiro kooban oo noocyo kala duwan oo qalab ah oo oggolaanaya in tan la dhammeeyo. Dredger Dredger iyo Tug Bucket Dredger waxaa loo adeegsaday shaqooyinka baarista.
Dredger Baaskiil-wadareedka waa gawaarida aadka culus ee ku yaala barxadda. Sida magaca baabuurkan soo jeedinaya, waxay leedahay laba baaldi ama kabadan. Baaldiyadaasi waa baaldiyaal furan marka qalabka laga saaro miisaanka oo laga joojiyo miisaanka oo la hakiyo. Sababtoo ah baaldiyada waa mid aad u culus, waxay hoos ugu dhaadhacaan badda. Marka baaldigu ka koreeyo xagga hoose ee badda, si toos ah ayuu u xiraa, sidaa daraadeed qalabkana waxaa loo qaadaa dusha sare oo aan ku duugin maryaha iyadoo la isticmaalayo baaldiyo.
Badeecadaha ugu awoodda badan baaldiyaalku waxay awood u leeyihiin in ay qiyaasaan qiyaastii 25 m3 hal wareeg oo shaqo. Isticmaalka baaldiyada qabsashada ayaa ugu faa'iideysanaya jilicsan ama qalab adag oo aan loo isticmaali karin qalab adag sida sandstone iyo dhagax. Boodhadhka baaldiyaal waa mid ka mid ah noocyada ugu da ' Si kastaba ha ahaatee, weli wali waxaa loo adeegsadaa adduunka oo dhan si loogu sameeyo qodobo hoosaad iyo hoos u dhac.
Haddii ciidda wasakhaysan la sawirayo, bustayaal gaar ah oo caag ah ayaa lagu dhejin karaa baaldiyo. Xirmooyinkaani waxay ka hortagaan kaydinta haraaga ah iyo walxaha ganaaxyada ah in lagu sii daayo khaanadaha biyaha inta lagu jiro jiidista baaldi hoose ee badda, ama waxay hubinayaan in xaddiga walxaha la sii daayo lagu hayn karo heerar aad u kooban.
Faa'iidada baaldiku waa inuu yahay mid aad u la isku halleyn karo oo awood u leh qodista iyo qoditaanka moolka dheer. Faa'iido darrooyinka ayaa ah in heerka qulqulka uu si aad ah hoos ugu dhaco iyadoo qotodheer uu sii kordhayo, iyo in hadda Boosaaso ay saameyn ku yeelan doonto saxnaanta iyo waxqabadka guud. Intaa waxaa u dheer, ka-saaridda iyo baarista laguma sameyn karo aaladda adag ee leh dhegaha.
Weelka Dredger Bucket Dredger waa markab qaas ah oo lagu rakibay nooc nabar qallalan isla markaana ka gooya tuubbo nuugid. In kasta oo markabku ku sii socdo jidka, ciidda ku qasmaysa biyo ayaa laga soo tuurayaa salka hoose ee badda ilaa markabka. Waxay lagama maarmaan u tahay in dejintu degto markabka. Si loo buuxiyo markabka inta ugu badan, waa in la hubiyo in biyo fara badan oo hadha ah ay qulquli karaan markabka inta uu markabku socdo. Markuu markabku buuxsamo, wuxuu aadaa goobta qashin-qubka oo wuxuu daadiyaa qashinka; markabku wuxuu markaa diyaar u yahay wareegga xiga.
Mashiinnada ugu awoodda badan Ted Buckers ayaa qaboojin kara qiyaasta 40,000 (qiyaastii 17,000 m3) oo ah qalabka hal wareeg oo shaqeynaya waxayna gooyn karaan oo cabbiraan qoto dheer oo ku saabsan mitirka 70. Dredger Bucket Dredgers ayaa xoqmi kara oo ku baari kara qalabka jilicsan ee dhexdhexaadka ah.
Faa'idada Dredger Baaskiilaha; Awoodda sarreysa iyo nidaamka moobiilladu kuma tiirsanaan hababka anchorage. Dhibaatooyinka; iyo la'aanta saxnaanta iyo qashinka iyo qaadista maraakiibahaan meelaha ku dhow xeebta.
Goobaha isku xirka isku-xirka ee marinka biyuhu ku jiraan, dhagaxyada qaarkood ayaa laga qoday oo laga qoday meel u dhow xeebta. Laba siyaabood oo kala duwan ayaa loo raacay hawshan. Mid ka mid ah qaababkan ayaa ah in lagu dabaqo habka caadiga ah ee qodista biyaha hoostiisa iyo qarqinta; Qaabka kale waa adeegsiga aaladda gubashada khaaska ah, oo u oggolaaneysa dhagaxa inuu kala baxo iyada oo aan wax qarxin. Labada habba waa gaabis iyo qaali.
Qaababka Gaadiidka Isgaadhsiinta ee Yenimahalle-Sentepe
Tilmaamaha IZBAN Tareenka cusub ee Hyundai Route.
90 90 Noocyada Profile ee Sigma
Qoto dheerida Marmaray
Marmaray wuxuu dhammeystiray dhowr sano